Double hamafa tarehimarika Fiondrehana Crypto Asset Market - Blockchain News
Ny cryptocurrency tsena dia toa ranomasina mena amin'izao fotoana izao, rehetra ao an-tampon'i 10 cryptocurrencies amin'ny tsena Cap tatitra roa-tarehimarika fatiantoka ho an'ny isan-jato ny farany 24 ora.
Bitcoin dia nihena 16 % toy izany koa ny fe-potoana herinandro ny 10-iva ambany $8,000 ary ny ratsy indrindra mety mijaly very isan-kerinandro (mihoatra ny 25 %) nanomboka tamin'ny Aprily 2013. Ny cryptocurrency nijaly ny 30 isan-jato indray mitete tamin'ny Janoary ary nidina 45 % tamin'ny isan-taona-to-daty fototra.
Ny Etera Ethereum famantarana dia nidina ny 28 %. Ny cryptocurrency nijery somary tsy voahozongozona tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, Voalaza fa noho ny rafitra fampindramam-drenivohitra sy Venezoela ny fanapahan-kevitry ny presale Petro cryptocurrency eo amin'ny sehatra ethereum. Na izany aza, ny omby mijery fangejan'ny efa malemy sy Ita Voaova hita raharaham-barotra manodidina $785.
Mandritra izany fotoana izany, Ripple ny XRP famantarana laharana fahatelo amin'ny lisitry ny resy miaraka amin'ny 35 isan-jato indray mitete. Ny cryptocurrency ankehitriny lavo tamin ' $0.635 - ny ambany indrindra hatramin'ny ambaratonga Dec. 15. Izany dia manaraka ny ratsy XRP voalohany ka hatramin'ny taona, miaraka amin'ny 49 isan-jato latsaka nandritra Janoary.
ankapobeny, ny tsena tanteraka capitalization rehetra nalaina cryptocurrencies miara-dia nandatsaka bebe kokoa noho ny $100 lavitrisa.
Koa nidina ny tabilao, namely ny naoty tsara tsy fahita firy tao anatin'ny maizina sy ny loza, ny volamena tohanan'ny famantarana atao hoe DigixDAO (DGD) miavaka rehefa avy namoaka 30 isan-jato tombony.
Nandritra ny taon-dasa, an increas...
Previous Post:Blockchain Observatory sy Forum mba hitondra EU ny "nitarika" ny Blockchain Tech
Next Post:Voalohany Kanada Blockchain ETF eken'ny dalàna